China ifilimu yokuncamathela eshushu yabenzi be-insole kunye nabathengisi | I-H & H
Ifilimu yokuncamathela eshushu ye-insole
Ngaphandle okanye ngaphandle kwephepha ngaphandle
Ubukhulu / mm 0.015 / 0.02 / 0.025 / 0.035 / 0.04 / 0.06 / 0.08 / 0.1
Ububanzi / m / 1.2m-1.52m njengoko wena
Indawo yokunyibilika 40-60 ℃
Umsebenzi wobugcisa Umatshini wokucinezela ubushushu: 100-140, 5-12s 0.4mpa
Ifilimu ye-TPU eshushu yokunyibilikisa efanelekileyo ekumanyanisweni kwePVC, ulusu olungelulo, ilaphu, ifayibha kunye nezinye izinto ezifuna ubushushu obuphantsi. Ngokwesiqhelo isetyenziselwa ukwenza i-PU foam insole efanelekileyo-yendalo kwaye ayinabungozi.
Xa kuthelekiswa nokudibanisa iglu engamanzi, le mveliso iziphatha kakuhle kwimiba emininzi enje ngobudlelwane bendalo, inkqubo yokwenza isicelo kunye nokonga iindleko ezisisiseko. Kuphela kusetyenzwa ngokucinezela ubushushu, apho kuya kufezekiswa i-lamination.
Singayenza le mveliso kunye okanye ngaphandle kwe-substrate, ngokweemfuno zabathengi. Ngokwesiqhelo, kusetyenziswa oomatshini abakhulu bokulaminetha ukuqinisa ukuxhasa ilaphu. Uninzi lwabathengi alusebenzisi i-substrate, okanye abanye abathengi bafuna ifilimu ene-pe film substrate xa besebenzisa umatshini wokulaminetha olele ebhedini. Sinokubonelela ngale nto. Ifilimu eyenziwe nge-TPU ithambile kwaye iyahlambeka, ethi ichaze ukuba kutheni le mveliso ithandwa kangaka. Ukongeza, ubuninzi bale modeli yimiqulu engama-500m, ububanzi obuqhelekileyo buyi-152cm okanye i-144cm, obunye ububanzi bunokwenziwa ngokwezifiso.
1. Ukuziva kwesandla okuthambileyo: xa isetyenziswa kwi-insole, imveliso iya kuba nokunxiba okuthambileyo kwaye kukhululekile.
2. Ukunganyangeki ngamanzi: Kukwazi ukumelana nokuhlamba amanzi amaxesha angama-10.
3. Ukungasebenzisi ityhefu kunye nokusingqongileyo: Ayizukukhupha ivumba elibi kwaye ayizukuchaphazela impilo yabasebenzi
4. Kulula ukuqhubekeka koomatshini nasekugcinweni kweendleko zabasebenzi: Ukulungiswa komatshini wokukhusela ngokuzenzekelayo, konga iindleko zabasebenzi.
5. Indawo yokunyibilika ephantsi: ilungele iimeko zokuthambisa njengelaphu elinobushushu obuphantsi.
I-PU foam insole
Ifilimu yokunyibilika eshushu isetyenziswa ngokubanzi kwi-insole lamination ethandwa kakhulu ngabathengi ngenxa yokuthamba kwayo kunye nokuziva unxibe imvakalelo. Ngaphandle koko, ukutshintsha iglu yemveli yokuncamathelisa, ukunyibilikisa ifilimu yokuncamathelisa eshushu kuye kwaba yinto ephambili yokuba amawaka ezihlangu abenzi bezinto bezisetyenziselwe iminyaka emininzi.
I-L341B eshushu yokunyibilika ifilimu yokuncamathelisa nayo ingasetyenziswa kwimethi yemoto, iingxowa kunye nemithwalo, ilaphu. Ngokukodwa ekudityanisweni kweemveliso zebhodi ene-foam, izisombululo zenkampani yethu kule ndawo sele zikhule ngokwaneleyo. Ukuza kuthi ga ngoku, sifikelele kwintsebenziswano ngobuchule kunye neenkampani zemithwalo ezingaphezu kwama-20 ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye nokusetyenziswa kwefilimu yokunyibilikisa eshushu kwicandelo lomthwalo kunye nokuhlanganiswa kwengxowa kufezekisile iimpendulo ezilungileyo kakhulu.
Egqithileyo CPE umboniso for CPE ifaskoti -HH
Okulandelayo: I-TPU ishushu inyibilika kwiphepha leglu le-insole
Ifilimu ye-Elestric Tpu eshushu
Ifilimu ka-Eva eshushu
Ifilimu ye-Eva eshushu yeWebhu
Ifilimu yePa eshushu yokunyibilika
Iphepha leGlue Glue elishushu
Ifilimu yeWebhu eshushu yePa
Ifilimu yeTpu eshushu
Iphepha leTpu elishushu leMelt Glue
Iphepha lokusika unobumba oshushu
Ifilimu yokuncamathela eshushu ye-PA
Ifilimu yokuncamathela eshushu eshushu kwimpahla yangaphandle
I-EVA eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathelisa izihlangu